Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mwedzi", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mwedzi", iro shamwari manzwiro?
Card pakati 3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera of "mwedzi" neizvi chinzvimbo uye wakasununguka yokunyatsoongorora kuti nzira
"mwedzi" ndiko, kana mupfungwa mamiriro haana kumbozununguka asina kugadzikana, kwete kujaira zvakanaka manzwiro zvinoreva kuti chinhu uchagarireiko nyore kuva tariro uye mamiriro ezvinhu. Kana kwete wakasununguka navo kwete kuramba zvakajeka-chena dema-uye mamiriro ezvinhu, zvingava rimwe bato yegomba risina mwoyo uye kunetseka apo wavers pakati tariro uye kutya muzviito, kusagadzikana mupfungwa mamiriro ezvinhu hakusi kudzikama achatambanudza zvizere mupfungwa .
kadhi "Moon" ndiye uderedze kuitika panguva nguva nenguva iyo anotanga kufamba nenzira murombo kutapwa aibuda mune ramangwana. Kuti arege kumedzwa aibuda, kubvisa kusagadzikana maatomu akafanana zviri kwako pfungwa, zvakakosha kudzokorora mirayiridzo. Kana iwe
anokumhan'arira manzwiro kuti "mwedzi" zvakanaka nzvimbo Vanzveri kureva
"mwedzi" akabuda yakanaka nechinzvimbo, mwoyo inoratidza mamiriro ezvinhu hakusi kudzikama. Kutya uye kufunganya, kunetseka, kana rokuungudza Manzwiro akatonga pfungwa, kana riri pakuti asingafari, ungave uyewo kunzwa harityisi.
kubudikidza chiteshi vakamupupurira Manzwiro, iye kana waitsimbirira manzwiro ako, asi iwe unogona kana Kangu 'mudzivisi, chiito chakadaro ichava Tsukihanashi kure naye. Nekuti mupfungwa kusagadzikana mamiriro, pasina dzishande napo manzwiro ake, nani kuisa chinhambwe, unogona kuramba maviri vanhu ukama ano.
kune rusina kukwana mberi rudo, iye zvakanaka hakurevi vanewo takatsamwira newe. Nokuti hamugoni wakanyatsokodzera manzwiro mamwe bato iri pano kunyange kana kupupura mune chisina kutsiga ezvinhu, sekuru zviri nani kurega kupupura. Chokutanga, kubva akadzikama ndatura befu, kubvisa zvakaipa pfungwa uye tariro kusagadzikana zvinhu mupfungwa, regai akashanda kuramba hukama hwake ano. To
achachinja nzvimbo "mwedzi" rinoreva Kana manzwiro mamwe webato
vakaturikira vachiti "mwedzi" akabuda ari neizvi chinzvimbo, kunyange iripo yakanga isina uye ita mhirizhonga mamiriro ezvinhu, zvinoreva kuti kuguma kwava.
kukurira ezvinhu akaoma, ipapo iwe muchimirira akanaka uye ramangwana, zvinokwanisika kuti zvinokwanisika kuti vabudirire maoko. Zvichida pane mukana kuti manzwiro aiva kusagadzikana anova kudzikama kusvikira zvino. Kana ndikawana manzwiro ake kana rusina kukwana mberi rudo, dzakadai mashoko ake nezviito ari ini kufurira musana wangu, zvingava kuti wanamatira kuchekerera manzwiro angu.
kadhi iri, asi manzwiro ake hazvo hakurevi kuti ndiye akakodzera nokuti isu mashoko ake nemabasa ndiko kuti mukana kubvisa manzwiro ako.